हामी कुन राजनैतिक व्यवस्था मा छौँ ? प्रस्न मुलतः सैद्धान्तिक नै हो ।
नेकपा माओवादीको सैद्धान्तिक धार नेपाली समाज पुजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने बिन्दुमा आइ अड्केको थियो ।
जनयुद्ध मार्फत अधिकार र वर्गसंघर्ष बुझाउने राजनैतिक चेत जनता सामु पुर्याउनु माओवादी को सफलता मान्नुपर्छ ।
सामन्तवाद भित्र हुर्केका केही प्रतिक्रियावादी हरुले सर्वाहाराको पक्षमा आफुलाइ परिवर्तन गर्न खोजे , तत्पश्चात अर्ध-सामन्तवादी व्यवस्थाले नेपाली समाजको लामो समय नेतृत्व गरिरह्यो ।
नेकपा माओवादी ले यस्लाइ नबुझेको थिएन तर पार्टी ती तमाम परिवर्तित सामन्तीहरु को हातमा पुगिसकेको थियो जसको चरित्र नै लोकतान्त्रिक थिएन ।
जनयुद्ध ले विभिन्न खाले सपनाका जग बसाएर नेता सहर पठाएको थियो । तर पार्टी बिस्तारै कमजोर हुने देखियो र तत्कालै घोषणा गरियो
: ´ नेपाली समाज पुजीवादी भयो तर यस्को चरित्र दलाली र नोकरशाही छ ।`
यस्ले एकपटक फेरि अर्ध रुप मा रहेको सामन्तवाद लाई लोकतन्त्रमा परिणत गर्यो र जरा बलियो बनाइ थप नेतृत्व गर्न सफल भयो ।
नेकपा एमाले लाई जनताको बहुदलीय जनवादले बहुमतको यात्रा सम्म पुर्याउन मद्दत गर्यो । सकेसम्मको शान्तिपूर्ण राजनैतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन नेकपा एमाले को राजनैतिक धार नै अहिले सम्मको सफल रणनीति हो ।
नेपाली भुमी सुहाउँदो क्रान्तिकारी नीति तथा कार्यक्रम पार्टी भित्र एउटा सिद्धांत को रुपमा स्थापित गराइयो । यस्को निचोड सामन्तवाद को अन्त्य नै थियो ।
जननेता मदन भण्डारी को रहस्यमय हत्या पश्चात् बिकसित राजनीति बिस्तारै सामन्ती हरु को खेलमा नेकपा माओवादी भित्र छिरे झैं स्थान खोज्दै एमाले भित्र अगाडि बढ्यो । प्रतिक्रियावादी तत्व हरु ले केही सर्वाहारा को आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो र आफ्नो उपस्थिति लाई बलियो बनाउन सफल भयो ।
नेकपा एमाले ले तत्पश्चात महाधिवेशन मार्फत घोषण गर्यो : ´ नेपाली समाज पुजीवादी चरण मा प्रवेश गर्यो तर यस्को चरित्र दलाल छ । `
दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी यसरी एउटै राजनैनिक निचोड सम्म आइपुग्नु मा ती लोकतन्त्रको खोल ओडेका सामन्ती हरु को प्रतिस्पर्धा हो भन्ने ठहरिन्छ । चुनावमा टिकट वितरण संगै समानुपातिक छनौट र नियुक्ति हरु सम्म हेर्दा ती सामन्तवादका परिवर्तित स्वरुप नै अगाडि देखियो । महत्त्वपूर्ण राजनैतिक जिम्मेवारी देखि संसद सम्मको यात्रा फेरि पनि त्यही पुरानो समाजको फोहोर हरु ले गरेको पाइन्छ ।
हिजोका जमिनदार , सामन्ती , दरबारिया , मण्डले , भु-माफिया , गुण्डा आदि इत्यादि पार्टी प्रवेश गराइयो र भनियो :´ बिग्रेका र बाटो बिराएका हरु लाई सुध्रिने मौका दिने र यो कम्युनिस्ट पार्टी भित्र मात्र सम्भब छ ।`
यी तमाम नाममा पार्टी प्रवेश भए तर राजनीति लोकतान्त्रिक भएन त्यही पुरानो समाज को परिवर्तित स्वरुप बलियो झुण्ड जम्मा गर्न सफल भयो ।
पार्टीमा लामो समय इमानदार रहि देश र जनताका निमित्त सामाजिक सेवा गर्ने व्यक्तित्व हरु लोकतन्त्र पछिको अबसर हरु बाट बन्चित भइ निरास हुने अवस्था सम्म पुर्याइयो । गुण्डा नाइके हरु पार्टी सहयोग मा संसद सम्म पुगे , जसबाट तस्करी गर्न कानुनी सहयोग मिल्न पुग्यो । महिला आन्दोलन हरु ´ पोइल जान पाम ` भन्ने तिर गएर ठोकियो । अख्तियार लोकमान जस्ता को हात मा गयो । मुक्तिका आन्दोलन गर्ने दलित आन्दोलन एनजियो आइएनजियो को प्रगती रिपोर्ट मा थन्किन पुग्यो । किसान आन्दोलन अहिले माइतीघर सम्म आइपुगेको छ ।
भुमिहिन , सुकुम्बासी , बादी , मधेशी जो लोकतान्त्रिक राज्यको पर्खाइमा थिए ती सबैको आन्दोलन आज प्रायोजित छ र संचालित कहि कतै बाट हुने गर्द्छ । यी र यस्ता आन्दोलन तमाम छन ।
यहाँ सम्म आइपुग्दा सबै यस्ता नकारात्मक घटना मात्र भएको छैन बिकास पनि तिब्र भएको छ । मानिस को आर्थिक र सामाजिक जिवनमा धेरै परिवर्तन आएको छ । बिकासका पुर्वाधारहरु स्वास्थ्य , शिक्षा , खानेपानी , बिद्दुत , मोटर-बाटो र दक्ष जनशक्ति आदि हिजोको समाजमा भन्दा निकै विकसित अवस्थामा आइपुगेको छ । बिकास भन्ने कुरा सामन्तवाद ले पनि रोक्न सक्दैन , यो गतिशील छ । प्रश्न लोकतन्त्र पछि को कति उदार भयो भन्ने नै हो । यो प्रायोजित हुन सक्दैन तर प्रगतिशील सदैव रहन्छ । अब बिकसित हुने राजनैतिक चक्र हरु मा व्यवस्था जे सुकै आएपनि समाजको स्वरुप र बिकास चरण अहिलेको भन्दा तिब्र रहन्छनै, यस्लाइ रोक्ने एजेन्डा बन्दैन ।
यसरी केहि राजनैतिक दलहरु ले सामन्तवादको पुर्ण अन्त्य भनेर घोषण गरे पनि ब्यवहार मा भने पुरानै समाजको धङधङी झल्किने गर्नाले के यी राजनैतिक दलहरु केही हतार मै पुजीवादी ब्यवस्था आयो भनेर गर्जेका त होइनन् ? यो प्रस्न आजको युवा-विद्यार्थी र जनताको साझा प्रश्न हुन पुगेको छ ।
पुजीवादी व्यवस्था आएको हो भने के त्यो यति , भाटभटेनी , एनसेल र पप्पु कन्स्ट्रक्सन लाई मात्र आएको हो त ? यिन्ले गर्ने दलाली र नोकरशाही ले गर्दा मात्र पुजीवाद बिकसित हुँदै गएको हो त ? बिना स्वस्थ प्रतिस्पर्धा , बिना कर र यस्तो उदारवादले के रास्ट्रीय पुजि बलियो हुन्छ त , प्रस्न यहि हो ?
राजनैतिक व्यवस्था को चरण क्रमश गर्ने हो भने सामन्तवाद को पुर्ण अन्त्य, पुजीवादको बिकास र यस्को पनि अन्त्य अनि समाजवाद को सुरुवात । अब लाग्दैन कि समाजवाद कोहि नेताले बोल्दियो र आयो । यस्को सुरुवात नै कठिन अवस्था मा आइपुगेको छ ।
फेरि पनि त्यही पुरानो समाज का सामन्ती हरु स्वरुप बदलेर समाज लाई झन झन पछाडि पार्दै छ , आफ्नो उपस्थिति लाई अझै मजबुत बनाइ समाजवादको नाम बेचेर शोषण गर्दै छ । यस्को उदाहरण हरु हाल नेपाली समाजमा घटेका र विकसित भैरहेका अवस्था हेरे प्रमाणित हुन्छ ।
भेदभाव र छुवाछूत पुर्ण निर्मुल हुनुपर्नेमा झन यस्ले वर्गीय रुप लिएको छ । काभ्रेको अजित मिजार अन्तरजातीय बिवाहको सिकार भै धेरै वर्ष देखि मुर्दाघर मा न्याय कुर्दै छ भने उता झापा तिर अस्ट्रेलियन दलित ले माघी बिवाह गर्न सफल भयो । यस्तो घटना हरु लाई नेपाली समाज ले कुन राजनैतिक व्यवस्थाको नाम दिने हो , प्रश्न त्यहीँ छ ।
भ्रष्टाचार , कमिशन र तमाम सेटिङ्गहरु कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एजेण्डा नै होइनन् तर यस्मै फस्दै जानु कुन राजनैतिक व्यवस्था को उपज हो भन्ने कुराको उत्तर युवा-विद्यार्थी ले खोज्नु पर्ने छ । न्याय र अन्याय को भिन्नता खोज्नु पर्ने देखिन्छ । धनी र गरिब बिचको गहिराइ नापिनु पर्दछ । शिक्षा कस्तो भन्ने बहस हुनु पर्छ । जनताको स्वास्थ्य मा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गरिनु पर्छ । भुमिहिन र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गरिनु पर्छ । दक्ष जनशक्ति बिदेशीने र पलायन हुने , ´ ब्रेन ड्रेन ` हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ ।
यी तमाम काम गरे मात्र समाजवाद को रेखा कोरिन सक्छ र नेपाली समाजले बिकसित हुने चरणमा प्रबेश पाउछ ।
तसर्थ पार्टीहरुले सर्वप्रथम स्पष्ट गराउनु अपरिहार्य छ - हामी कुन राजनैतिक व्यवस्था मा छौँ ? प्रस्न मुलतः सैद्धान्तिक नै हो ।